Telenor Broadband Myanmar - Linn Htet Aung
Linn Htet Aung
Hello! I am Linn Htet Aung ( Nwe Yoe ). Web Designer/Developer, Sushi Chef.Also interest and studying Radio Control Plane and UAV
Telenor Broadband Myanmar
ပြည်ပက ပြန်လာပြီးကတည်းက အင်တာနက်ကို Mobile Data နဲ့ပဲ သုံးဖြစ်တယ်။ ၂ ပတ်အတွင်းမှာ ကိုယ်သုံးတာ တော်တော်များတယ်။ သို့သော် Package တွေ ဝယ်သုံးတဲ့အတွက် သက်သာတယ်ပဲ ပြောရမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တော်တော်ကုန်ကျပါတယ်။ ရေရှည်အတွက် တွက်ကြည့်လိုက်တော့ လက်ရှိ ကိုယ့်နယ်မှာလည်း သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် Telenor Broadband လေးကို ရွေးချယ်ဖြစ်တယ်။
5 Mbps Speed + Wifi Router + Unlimited Data Plan နဲ့ကို 75000 ကျပ် ပေးရပါတယ်။ ကျနော် ဝယ်ယူတာကတော့ Telenor Broadband Myanmar ရဲ့ အင်တာနက် စာမျက်နှာကနေ Register လုပ်ပြီး မှာယူတာပါ။ အခြား ဝယ်ယူလို့ရတဲ့ ဆိုင်တွေလည်း ရှိပါတယ်။
အောက်က အင်တာနက် လိပ်စာကနေ မှာယူလို့ ရပါတယ်။ အိမ်တိုင်ရာအရောက် ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပို့ခ ပေးရပါတယ်။
Telenor Broadband ဝယ်ယူရန်
မဝယ်ခင်တော့ မိမိနေတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုနိုင်လားဆိုတာကို အရင်ဆုံး စစ်ကြည့်ရပါမယ်။ ရနိုင်တယ်ဆိုရင် Register ဆက်လုပ်ပြီး မှာယူပါ။ ငွေချေတဲ့စံနစ်တွေကတော့ Bank တွေကနေလွှဲပြီး ငွေချေနိုင်ပါတယ်။
စက်ရောက်လာရင်တော့ စောစောက Wifi Router ကို ပါဝါပေး။ Wifi စလွှင့်တာနဲ့ ဖုန်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေ TelenorHome Wifi ကိုချိတ်ဆက်ပါ။ Password ကတော့ Router ရဲ့ အောက်ခြေမှာ ရေးပေးထားပါတယ်။
ချိတ်ဆက်မိတာနဲ့ Browser အလိုလိုပွင့်လာပြီး Activate လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ မိမိ မှာယူထားတုန်းက ဝင်ခဲ့တဲ့ Username Password နဲ့ ဝင်ပြီးတာနဲ့ Activation လုပ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါပြီ။
Router အောက်ခြေမှာ ရေးထားတဲ့ Information တွေ အသုံးပြုပြီး Router ရဲ့ SSID ( Wifi အမည်) ပြောင်းလဲခြင်း၊ Password ပြောင်းလဲခြင်း စတာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ အသုံးပြုနေတဲ့ Device တွေကိုလည်း တွေ့နေရတော့ မသုံးစေချင်တဲ့ စက်တွေရှိရင်လည်း ပိတ်ထားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
Router မှာ Network အတွက် RJ45 တစ်ပေါက် ပါတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာမှာ တိုက်ရိုက် ထိုးသုံးနိုင်သလို အခြား Wifi Router လည်း ခွဲသုံးလို့ ရပါတယ်။
စတပ်တဲ့အချိန်တော့5Mbs Speed က 3.8 Mbs တက်လို့ သုံးရတာ သုံးပျော်ပါတယ်။
CB Bank MPU to CB Bank Visa Card
Walking on Doha Strand Road
Building No.51, Zone 40,Street 802, Yahya Bin Urwa Street, Doha, Qatar
Copyright © 2017 Linn Htet Aung. Designed By Portfolio Blogger Template | Distributed By Gooyaabi Templates